ကျောင်းပြီးသွားလည်း သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အဆက်အသွယ်မပြတ်စေတဲ့ နည်းလမ်း (၅) ခု - For her Myanmar
ကျောင်းပြီးသွားလည်း သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အဆက်အသွယ်မပြတ်စေတဲ့ နည်းလမ်း (၅) ခု
FUN, Relationship, Relationships>Friendship, Tips
ယောင်းရေ…တက္ကသိုလ်တက်နေတုန်းက Stella တို့သူငယ်ချင်းတွေ ပြောခဲ့ကြတဲ့စကားလေးတစ်ခွန်းရှိတယ်…”ငါတို့ကျောင်းပြီးရင်တောင် အဆက်အသွယ်မပြတ်ကြဘူးနော်”တဲ့။ တကယ်တမ်း ကျောင်းတွေပြီးတဲ့အခါမှာ တာဝန်နဲ့ဝတ္တရားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ နှစ်မြုပ်ပြီး သူငယ်ချင်းတွေမတွေ့ဖြစ်ကြတော့ဘူး။ ချိန်းကြရင်တောင် မအားသေးလို့ဆိုပြီး ရက်တွေရွှေ့မိပြန်ရော။ ဒီလိုနဲ့ မတွေ့ဖြစ်တာတွေများလာတဲ့အခါ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ဝေးကွာသွားရတာပါပဲ…ဒါဆိုဒီလိုမဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ ? Stella ကတော့ ဒီနည်းလမ်းတွေကို သုံးကြည့်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။
(၁) Group chat ထောင်ပါ
အခုခေတ်မှာက ဘာလုပ်လုပ်ဖုန်းနဲ့ပဲလုပ်နေရတာမို့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အဆက်အသွယ်မပြတ်ချင်ဘူးဆိုရင် သူတို့နေ့တိုင်းသုံးဖြစ်နေတဲ့ မက်ဆင်ဂျာမှာ group chat ထောင်လိုက်တာ အလွယ်ဆုံးဖြစ်မှာပါ။ သူငယ်ချင်းတွေချည်းပဲရှိတဲ့ group chat မှာ အချင်းချင်းစကြနောက်ကြ ရင်ဖွင့်ကြနဲ့ဆို အဆက်အသွယ်ပြတ်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
Related article >>> သူငယ်ချင်းများ ရည်းစားရပြီးနောက် ဖြစ်သွားတတ်သော အချိုး(၅)မျိုး
သူငယ်ချင်းဆုံဖြစ်ကြတဲ့ပွဲဆို မွေးနေ့လို့ပဲပြောရမယ်ထင်တယ်။ ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ မွေးနေ့လုပ်ပြီး သူငယ်ချင်းတွေကို ဖိတ်လိုက်ရင် ဆုံဖြစ်ကြမှာပါပဲ။ အဖွဲ့ထဲမှာ လူများလေလေ မွေးနေ့တွေများလေလေမို့ တစ်နှစ်မှာ ခဏခဏဆုံဖြစ်နေမှာပါ။
တစ်နှစ်မှာ တစ်ခါလောက်ဖြစ်ဖြစ် အုပ်စုလိုက်ခရီးထွက်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားကြည့်ပါ။ ဒီနှစ်တော့ ငါတို့ဘယ်သွားကြမယ်ဆိုပြီး ကြိုစီစဉ်ထားပါ။ ခရီးထွက်ရင် ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာ အုပ်စုလိုက်ဓာတ်ပုံတွေ ရိုက်ပါ။ ဒါတွေက တစ်ချိန်မှာ တစ်သသပြန်တမ်းတစရာ အမှတ်တရတွေ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
Related article >>> ၂၀၁၉ မှာ သူငယ်ချင်းနဲ့ အတူလုပ်သင့်သော အရာများ
(၄) အိမ်ကို သွားလည်ပါ
တကယ်လို့ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းက သူ့ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စကြောင့် ချိန်းထားတာကို ခဏခဏဖျက်နေရရင် သူ့အိမ်ကို သွားလည်လိုက်ပါ။ အိမ်မှာ ကော်ဖီဖြစ်ဖြစ်သောက်ပြီး စကားစမြည်ပြောတာက ပိုပြီးအေးအေးဆေးဆေးရှိပါတယ်။ သူငယ်ချင်းက နယ်မှာနေတာဆိုလည်း နယ်ကို သူငယ်ချင်းအုပ်စုလိုက် သွားလိုက်ပါ။
ယောင်းသူငယ်ချင်းတွေက အလုပ်လုပ်နေတဲ့သူများတယ်ဆိုရင်တော့ တစ်နေကုန်မအားလပ်ဖို့ ရာခိုင်နှုန်းများပါတယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ ညဘက်တွေချိန်းပြီး သူငယ်ချင်းတွေ ဘားသွားထိုင်ပါ။ သောက်ရင်းစားရင်း စကားပြောရတာပျော်စရာကောင်းပါတယ်။ (သူငယ်ချင်းက မသောက်တတ်ရင်လည်း သင်ပေးလိုက်ပါ။ အမြည်းထိုင်စားသူအလိုမရှိ)
Related article >>> ရည်းစားနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို တန်းတူအချိန်ပေးနိုင်အောင်…
ယောင်းတို့ရေ…သူငယ်ချင်းဆိုတာ ဘဝရဲ့အရေးကြီးတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါ။ အကူအညီလိုရင် ရောက်လေရာအရပ်က အပြေးအလွှားရောက်လာပြီး အကူအညီပေးတတ်တာ ဒီသူငယ်ချင်းတွေပါ။ ဒါကြောင့် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အဆက်မပြတ်ရလေအောင် ချိန်းကြတိုင်း တတ်နိုင်သမျှသွားဖြစ်အောင် သွားကြပါနော်။
ယောငျးရေ…တက်ကသိုလျတကျနတေုနျးက Stella တို့သူငယျခငျြးတှေ ပွောခဲ့ကွတဲ့စကားလေးတဈခှနျးရှိတယျ…”ငါတို့ကြောငျးပွီးရငျတောငျ အဆကျအသှယျမပွတျကွဘူးနျော”တဲ့။ တကယျတမျး ကြောငျးတှပွေီးတဲ့အခါမှာ တာဝနျနဲ့ဝတ်တရားဆိုတဲ့ခေါငျးစဉျအောကျမှာ နှဈမွုပျပွီး သူငယျခငျြးတှမေတှဖွေ့ဈကွတော့ဘူး။ ခြိနျးကွရငျတောငျ မအားသေးလို့ဆိုပွီး ရကျတှရှေမေိ့ပွနျရော။ ဒီလိုနဲ့ မတှဖွေ့ဈတာတှမြေားလာတဲ့အခါ တဖွညျးဖွညျးနဲ့ သူငယျခငျြးတှေ ဝေးကှာသှားရတာပါပဲ…ဒါဆိုဒီလိုမဖွဈအောငျ ဘယျလိုလုပျကွမလဲ ? Stella ကတော့ ဒီနညျးလမျးတှကေို သုံးကွညျ့ပါလို့ပွောခငျြပါတယျ။
(၁) Group chat ထောငျပါ
အခုခတျေမှာက ဘာလုပျလုပျဖုနျးနဲ့ပဲလုပျနရေတာမို့ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ အဆကျအသှယျမပွတျခငျြဘူးဆိုရငျ သူတို့နတေို့ငျးသုံးဖွဈနတေဲ့ မကျဆငျဂြာမှာ group chat ထောငျလိုကျတာ အလှယျဆုံးဖွဈမှာပါ။ သူငယျခငျြးတှခေညျြးပဲရှိတဲ့ group chat မှာ အခငျြးခငျြးစကွနောကျကွ ရငျဖှငျ့ကွနဲ့ဆို အဆကျအသှယျပွတျတော့မှာ မဟုတျပါဘူး။
Related article >>> သူငယျခငျြးမြား ရညျးစားရပွီးနောကျ ဖွဈသှားတတျသော အခြိုး(၅)မြိုး
သူငယျခငျြးဆုံဖွဈကွတဲ့ပှဲဆို မှေးနလေို့ပဲပွောရမယျထငျတယျ။ ဆိုငျတဈဆိုငျမှာ မှေးနလေု့ပျပွီး သူငယျခငျြးတှကေို ဖိတျလိုကျရငျ ဆုံဖွဈကွမှာပါပဲ။ အဖှဲ့ထဲမှာ လူမြားလလေေ မှေးနတှေ့မြေားလလေမေို့ တဈနှဈမှာ ခဏခဏဆုံဖွဈနမှောပါ။
တဈနှဈမှာ တဈခါလောကျဖွဈဖွဈ အုပျစုလိုကျခရီးထှကျဖွဈအောငျ ကွိုးစားကွညျ့ပါ။ ဒီနှဈတော့ ငါတို့ဘယျသှားကွမယျဆိုပွီး ကွိုစီစဉျထားပါ။ ခရီးထှကျရငျ ရောကျတဲ့နရောတိုငျးမှာ အုပျစုလိုကျဓာတျပုံတှေ ရိုကျပါ။ ဒါတှကေ တဈခြိနျမှာ တဈသသပွနျတမျးတစရာ အမှတျတရတှေ ဖွဈလာပါလိမျ့မယျ။
Related article >>> ၂၀၁၉ မှာ သူငယျခငျြးနဲ့ အတူလုပျသငျ့သော အရာမြား
(၄) အိမျကို သှားလညျပါ
တကယျလို့ ကိုယျ့သူငယျခငျြးက သူ့ရဲ့ကိုယျရေးကိုယျတာကိစ်စကွောငျ့ ခြိနျးထားတာကို ခဏခဏဖကျြနရေရငျ သူ့အိမျကို သှားလညျလိုကျပါ။ အိမျမှာ ကျောဖီဖွဈဖွဈသောကျပွီး စကားစမွညျပွောတာက ပိုပွီးအေးအေးဆေးဆေးရှိပါတယျ။ သူငယျခငျြးက နယျမှာနတောဆိုလညျး နယျကို သူငယျခငျြးအုပျစုလိုကျ သှားလိုကျပါ။
ယောငျးသူငယျခငျြးတှကေ အလုပျလုပျနတေဲ့သူမြားတယျဆိုရငျတော့ တဈနကေုနျမအားလပျဖို့ ရာခိုငျနှုနျးမြားပါတယျ။ ဒါဆိုရငျတော့ ညဘကျတှခြေိနျးပွီး သူငယျခငျြးတှေ ဘားသှားထိုငျပါ။ သောကျရငျးစားရငျး စကားပွောရတာပြျောစရာကောငျးပါတယျ။ (သူငယျခငျြးက မသောကျတတျရငျလညျး သငျပေးလိုကျပါ။ အမွညျးထိုငျစားသူအလိုမရှိ)
Related article >>> ရညျးစားနဲ့ သူငယျခငျြးတှကေို တနျးတူအခြိနျပေးနိုငျအောငျ
ယောငျးတို့ရေ…သူငယျခငျြးဆိုတာ ဘဝရဲ့အရေးကွီးတဲ့အစိတျအပိုငျးတဈခုပါ။ အကူအညီလိုရငျ ရောကျလရောအရပျက အပွေးအလှားရောကျလာပွီး အကူအညီပေးတတျတာ ဒီသူငယျခငျြးတှပေါ။ ဒါကွောငျ့ သူငယျခငျြးတှနေဲ့အဆကျမပွတျရလအေောငျ ခြိနျးကွတိုငျး တတျနိုငျသမြှသှားဖွဈအောငျ သှားကွပါနျော။
Tags: bff, friends, Friendship, Fun, Relationship, tips